China 3.2m Calandra Roller Heat Press Machine sy mpamatsy | Asiaprint
Kisary momba ny masinina
1. Rack Drive: ahenao ny setroka ao anaty chassis, fotoana fanompoana maharitra.
2. Fanetezana mandeha ho azy: azo ahitsy ho azy izy io mba hisorohana ny fihetsiky ny lamba firakotra hanohina ny vokan'ny fanontana.
4. Fitaovana misaraka: Ny fijanonana mahatsapa ho azy dia afaka manasaraka ny fahatsapana avy hatrany ho azy amin'ny toe-javatra maika, manome fiarovana bebe kokoa ny lamba firakotra ary hanitatra ny fiainana ampiasaina.
5. Fitaovana fanerena: azo ovaina ny fanerena ary azo fehezina tsara ny tsindry famindrana.
6. Fitaovana misaraka amin'ny tanana: raha misy fanapahana herinaratra, ampitomboy ny fiarovana sy ny famolavolana ny fitaovana miverina amin'ny tanana mba hiarovana ny ain'ny serivisy lamba firakotra.
7. Shaft-drivotra: Ho an'ny fanangonana taratasy sublimation efa niasa, dia afaka mamonjy fotoana sy ezaka izy io
Fanitsiana bebe kokoa
Touch Screen Panel: fanaraha-maso marina ny mari-pana sy ny fotoana. Izy io dia famolavolana mahaolona ary mora ampiasaina.
Fitaovana miendrika "U": ho an'ny famahanana lamba malefaka dia azony atao ny mitazona fanamiana sy fitehirizana asa bebe kokoa.
Rafitra fanalefahana: Miaraha miasa amin'ny setroka sy gazy novokarina tamin'ny dingan'ny fanontana fanontana, Miasa amin'ny fomba mahomby kokoa.
Fitaovana famerenana lamba: ho an'ny fanangonana lamba vita rehefa vita pirinty.
Fitaovana fitehirizana "V": ny roller ho an'ny taratasy fampiasa sublimation eo amin'ilay fitoeram-pivarotana hanala azy io.
Jiro fanairana: Rehefa tafiditra tsara ilay lamba firakotra, dia manao feo ho fampahatsiahivana izany.
Package sy serivisy
1. Ny masinin-tsika rehetra dia ho fonosin'ny fingotra vita amin'ny foam aloha, avy eo dia hapetraka ao anaty boaty misy boaty fandefasana eo amboniny.
2. tsy maintsy miezaka mafy araka izay azo atao izahay mba hahazoana antoka fa hampitaina aminao tsy misy simba ireo masinina rehetra.
3. Misy olana mitranga raha tompon'andraikitra amin'ny fitaterana izahay.
4. Fanohanana ara-teknika maharitra amin'ny fiainana.
5. Omeo faritra maimaim-poana rehefa misy olana mitranga ao anatin'ny herintaona.
Teo aloha: Manan-tsaina Control Jersey Calandra Roll Heat Press Machine
Manaraka: Rolll Hivezivezy milina fanontam-pirinty kalandrie
Digital 3D lamba vita amin'ny hoditra efatra embossin ...
Milina famindrana hafanana lehibe pneumatika
16 × 24 T-shirt Sublimation Famindrana hafanana Press M ...
Milina fanoratana mari-pana ho an'ny mari-pana Pneumatika